ကျမရဲ့နေရာလေး: September 2018
လူတွေများ တနေ့၂၄နာရီ ရထားတာခြင်းတူပေမဲ့ အသုံးပြုပုံခြင်းကွာရင် လူတွေရဲ့တိုးတက်မူ့တွေလည်း ကွာသွား ကြတယ်တဲ့။ စာထဲမှာတော့ ဂလိုကြီးရေးထားတာဘဲ ဟုတ်ချင်လည်းဟုတ်မယ်။ ကျုပ်များ နေ ထွက်ကနေ နေဝင်ချိန်ထိ လုပ်နေတာဘဲ အချိန်လည်းမလောက်သလိုဘဲဗျာ၊ သူများတွေလိုလည်း ဘာမှ စီးပွားရေးလုပ်တာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ အခက်တွေ့ပေါ့။ သွေးလေးဖက်နာဆိုတဲ့ ရောဂါက လက်ချောင်းတွေ အကွေးအဆန့်ကအစ နာတာဗျာ။ အရင်ကနာရီဝက်နဲ့ဟင်းတွေချက်ပြုတ်ပြီးတာ ခုတော့ ၂-၃ နာရီ အချိန်ယူရ။ အိမ်ကကြွေထည် ပုဂံခွက်ယောက်တွေလည်း မလာကီးသွားကြတာမနဲပေါ့ 😁 😊 ခြေထောက်က သိပ်မနာတော့ဘူး။ လေ့ကျင့် ခန်းသွားလုပ်လို့ရနေပြီ။ လက်ချောင်းဘဲကျန်တော့တယ် ဆနွန်းသောက်ဆိုလို့ သောက်လွန်းလို့ သွားတွေ ဝါကုန်လို့ကိုယ့်သွားဆရာဝန်က ပြောနေပြီ။ ရှင့်သွား
ကကော်ဖီသောက်လို့လားတဲ့။ အရောင်တွေစွဲလို့ ဆိုဘဲ။ကော်ဖီကတော့ဗျာ တလနေတောင် တခွက်မ သောက်ဖြစ်။
ဒါပေမဲ့တိုးတက်တာတွေပြောပြရအုံးမယ်။ အားကစားရုံသွားပြီး လေ့ကျင့်ခန်းသွားလုပ်တာ ဘာလုပ် တယ်မှတ်ဒုံးဗျ။ အလေးမတာဗျို့။ လက်မောင်းသန်ဖို့လေ၊ အရိုးအဆစ်နာတယ်ဆိုရင် ဒီမှာတော့လေ့
ကျင့်ခန်းဘဲ လုပ်ခိုင်းနေတာဘဲ။ အစကတော့ မလုပ်ချင်ဘူး။ ခုတော့ လုပ်ရင်းနဲ့အိုကေလို့၊ တပတ်
၅ရက် သွားနေပြီ။ ပိတ်ရက်ကျတော့ အိမ်နားက Park တွေသွားတယ်လေ။
အမေရိကားမှာက လူတွေဘဲအိမ်နံမည်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ ပြည်နယ်တွေလည်း nick name တွေ
ဘာတွေနဲ့ဗျ။ နယူးဂျာစီမှာ ဥယျာဉ်ပန်းခြံတွေကများတော့ Garden state လို့ခေါ်သတဲ့။ အိမ်ပတ်ချာ လည်မှာဘဲ အကြီးကြီး ၂ခုရှိတယ်။
မြစ်ရိုးတလျောက် လူတွေလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ အပမ်းဖြေဖို့လုပ်ထားတာများဗျာ..ကောင်းလိုက်တာ ဒေါင်း
သစ်ပင်ကြီးတွေဝေဝေဆာဆာနဲ့ သစ်ပင်အောက်မှာ အကင်ကင်ဖို့နေရာတွေ ခုံတန်းလျားတွေ စားပွဲတွေချထားပေးတာ မနဲ။ အစုလိုက်ဆိုရင် ၆-၇ နေရာလောက်ရှိတယ်။
အမေရိကန် football ကစားဖို့ ဘောလုံးကန်ဖို့ ဘက်စကက်ဘောဆော့ဖို့ တင်းနစ်ကွင်း ၆ခုထက်မနဲ ခွေးထိန်းကွင်းတောင်၂ကွင်းရှိ ခွေးအသေးနဲ့အကြီး။ စက်ဘီးစီးနဲ့လူလျောက်လမ်းကသပ်သပ်စီ။ မြစ်ချောင်းထဲမှာ မော်တော်မောင်းဖို့ မော်တော်လျောဆင်း ဆိပ်ခံတောင်ပါသေး။
အထဲဝင်သွားတာနဲ့ စိမ်းစိုလို့...ထူးဆန်းတာတခုတွေ့မိတာက Park ရဲ့ဘေးနားလေးက စိုက်ပျိုးခင်း ငယ်လေးတွေပါဘဲ။
ဒီနယ်မြေ County ရဲ့ဆိုင်းဘုတ်ဖတ်၊ ဂူးဂဲနဲ့ပြန်ရှာဖတ်မှ သိတာ၊ စိုက်ချင်ရင် အသင်းဝင်ရတယ်။ မြေနေရာ လပ်မရှိသေးရင်တော့ စောင့်အုံးပေါ့။
ကိုယ်ရထားတဲ့အကွက်မှာ ကြိုက်တာစိုက် ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ရေလောင်းပေါင်းသင် အသီးခူးစားလို့ရ ။ သူများနေရာတော့ သွားမခူးရဘူးပေါ့ဗျာ။ ဝင်းခတ်ထားတာ စပ်စုစိန်တို့က ဝင်တာပေါ့၊ တောကြည့်
တောင်ကြည့် မေးမြန်းတော့ အဲ့အထဲမှာ ပေါင်းသင်နေတာက စီလုတ်တွေအုပ်စုလိုက်၊ ဝတ်ထားတာက
လည်းတကဲ့ လယ်ကွင်းထဲသွားမဲ့အတိုင်း အပြန်မှာ စပ်စုစိန်တို့မသိမသာနဲ့ သိသိသာသာပေါ့လေ😅
လိုက်ကြည့်တာ ဒင်းတို့တွေ ဘယ်နားနေကြကြောင်း!!!
တွေ့ပြီဗျ...မြစ်ရိုးဘေးနားက APT တွေ ၆နေရာလောက်ရှိတာ။ အကျယ်ကြီးတွေ၊ အိုးလာလား...(ပြင်သစ်
သံဖြင့်ဖတ်ပါရန်😬😂) အခန်းပေါင်း ရာချီရှိတဲ့ နေရာမှာ ထောင်ချီသော စီလုတ်ကြီးစိုးနေတာဘဲ...။ သူတို့
စိုက်ပျိုးရေးကို အမေရိကားထိဘယ်လာ စိုက်စားနေတုံး..ကောင်းလိုက်တာ..။ ဒါကြောင့် စပ်စုစိန် ပတ်ဝန်း ကျင်မှာ စီလုတ်ကုန်စုံဆိုင်ကြီးတွေ များတာကိုး!!!!!
ကိုင်း..လမ်းဆက်လျောက်ရအောင်...ဟိုး..မြစ်ရိုးအောက်ဖက် တံတားလှမ်းမြင်ရတယ်။ အဲ့အထိ ကွင်းထဲ ကလူလျောက်လမ်းပေါ်ကနေ လျောက်ကြတာပေါ့...။ တခါအပြင်ထွက်ရင် ခြေလှမ်း တစ်သောင်းကျော်က အသာလေးနဲ့ရတယ်။
နောက်တနေရာကတော့ အိမ်နဲ့ ၁ဝမိနစ် လောက်ကားမောင်းရ အိမ်နဲ့ကပ်ရပ်ကတော့ လမ်းလျောက် သွားတာပါ။ ဝေးတဲ့နေရာကဆို တိရစ္ဆာန်ရုံ တောင်ပါသေး။ ဝင်ကြေးမရှိပါဘူး။ အများပြည်သူအတွက် ပြည်သူ့အခွန်ပေးထားတာတွေထဲကနေ လုပ်ထားပေးတာပေါ့။ ပြည်သူတွေခံစားသင့်တယ် ခံစားထိုက် တယ်လေ။ မြို့ပြအင်္ဂါနဲ့ညီအောင် ပန်းခြံတွေဥယျာဉ်တွေက ရှိကိုရှိသင့်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာရေးအတွက်ဘဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်အမောတွေ အပမ်းဖြေဖို့ မိသားစုတွေ နားနေဖို့ဆိုတာ လိုအပ်
သလို ခလေးတွေယာဉ်အန္တရယ်ကင်းတဲ့ မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းပေါ်လွတ်လပ်ပြေးလွှားဆော့ကစားနေတာ ဘယ်
လောက်စိတ်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းတဲ့ မြင်ကွင်းမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာ မှန်းဆကြည့်ပါဗျာ...။
တိရစ္ဆာန်ရုံကလည်း သိပ်အစုံကြီးမဟုတ်ပါဘူး ခလေးတွေတော့ ယုံတွေ သမင် ဒရယ်တွေ ကြက်တွေ ဝက် တွေ ဒေါင်းတွေလောက်တွေ့တာကိုဘဲ ပျော်နေကြတာ။ ကိုယ်တောင်ပျော်နေပါတယ်ဆို 😝
ဒီမှာလည်း အကျယ်ကြီး ဒီPark က အိမ်နားက Park ထက်တောင် ပိုနံမည်ကြီးဆိုဘဲ..
Park ထဲက အဝင်ကားလမ်း...
စပ်စပ်စုစုနဲ့ ဖတ်မှတ်လေ့လာသိသလောက်ပြောရမယ်ဆိုရင် အမေရိကားက အမေရိကန်တွေ ခုလို ခံစား
နေရတာ သူတို့ဘိုးဘွားဘီဘင်က ချမှတ်ခဲ့တဲ့ မှန်ကန်တဲ့စနစ်တွေကြောင့်ပါဘဲဗျာ..။ တိုးတက်ဖို့ကို လိုလား ရင် ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာကြီးကို ကိုယ်တိုင်ထလုပ်မှဘဲရတာပါလေ...။ ကျုပ်ခံစားနေရတဲ့ ရောဂါဝေဒနာ
ပျောက်ဖို့ ဆရာဝန်ဆေးသောက်စောင့်နေရုံမပြီးပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ပါဝင်လူပ်ရှားမှမြန်မြန်ဆန်ဆန်
မြန်မာပြည်မှာ ပြောင်းလဲချင်ပါတယ်ဆိုပြီး ကုန်းအော်၊ တခါမှ ခွန်အားစိတ်အားမစိုက် လက်သန်းမှင်ပေရုံနဲ့
ပြောင်းလဲခြင်းကရှေ့မှာကြွတက်မလာနိုင်တာက သေချာတယ်ဗျာ...။ ကိုယ်တိုင်ကကော ဘာလုပ်ပြီးပြီလဲ!!
စနစ်မှန်တခု ဥပဒေတခု ဖြစ်လာဖို့ရှေ့ကရုန်းနေကြသူတွေကို အားနာစရာတောင်ကောင်းနေပေါ့ဗျာ...။
အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်တွေးတောဆင်ခြင်မူ့လေး ရှိသင့်ပါတယ်။ ထစ်ကနဲဆို အစိုးရချည့်ကုန်းအော်
အပြစ်ပုံချသူများကို ကြည့်ရင်းလူအများသုံးတဲ့ FB မဝင်ချင်တော့ဘူး...။ အကုသိုလ်များလွန်းလို့ပါ။ ဘုရား ပုံတွေနေ့တိုင်းတင်သူတွေရဲ့ အထဲက လောဘဒေါသ၊ တရားဓမ္မဝေဌနေသူတွေရဲ့ လောဘကို လှစ်ကနဲ
သူတို့ကော်မန့်တွေမှာတွေ့ရတော့ ......ကဲပါလေ..ကိုယ့်ဌာနေဟောင်း..နေရာမှာဘဲ ပြန်လာအော်တာဘဲ
တိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းကို လက်ခံပြီး တိုးတက်ဖို့ ပြောင်းလဲကြပါစို့...ကဲ..ထ..ထ..အိမ်နားက မြေကွက်မှာ
အမိူက်ရှင်းရအောင်လေ...😊😁😂 အပြင်ကအမိူက် စိတ်ထဲကအမိူက်တွေရှင်းထုတ်ပစ်ရအောင်လား....
ကိုယ်တို့တိုင်းပြည်ကိုလည်း နေချင်စဖွယ်ဖြစ်အောင် လုပ်ကြမယ်လေ...
Posted by မီးမီးငယ် at 4:09 PM2comments Links to this post